Indlela Esheshayo | Izithuthi Zezimoto | Franchiseek
»Amathuba weFranchise»I-Lane Franchise esheshayo
I-Lane Franchise esheshayo
U- £ 100K Min Capital
I-Quick Lane kuwukusebenza komhlaba wonke okuphathelene nezindawo ezinamalungu ayinkulungwane ezinamalayisense kanye nama-franchised emhlabeni jikelele. Le nkampani yazalwa ngocwaningo lwabathengi mayelana nezidingo zomshayeli kusuka ezikhungweni zokulungisa izimoto. Abashayeli bacaphuna obala, lula, ukuzethemba kanye nemvelo engenazo izingcindezi njengezinto ezibalulekile zabo. Lokhu kudale i-Quick Lane ethos: ukuhlinzeka 'lula ngokuzethemba .` I-Quick Lane inikeza izinsiza eziyi-13 zokulungisa nokukhanya okuncane ngamathayi nokuhlolwa kwe-MOT njengegqozi lokulungiswa kanye / noma ukushintshwa kwezingxenye ezibalulekile ezungeze isondo. Izikhungo zayo zibeka ubuchwepheshe enhliziyweni yohambo lokulungisa amakhasimende, zinikezela ngamakhasimende angajwayelekile futhi ahlanganisiwe okuhlangenwe nakho kwe-inthanethi ngobukhona bedijithali obunamandla. Njengoba iqhubeka nokunwebeka emhlabeni wonke ezimakethe zase-UK naseJalimane, i-Quick Lane ifuna amathuba ahlukahlukene e-franchise. Impumelelo yebhizinisi ezimakethe zethu zokuhweba zamanje zingumphumela wokuzibophezela kwethu ekusebenzeni nokulungiswa kwezinsizakusebenza, ubuchwepheshe obungenakulungiswa, ukusebenziseka kwamakhasimende ethu kanye nobuchwepheshe bethu obungahambisani. I-Quick Lane iyaziqhenya ngokunikeza insiza egcina abathengi bebuya kaninginingi. Kuyasithokozisa ukumemezela ukuthi uhlelo lwe-Quick Lane lwethula e-UK naseJalimane ngaphansi kobuhlakani obusha bebhizinisi ngenhloso yokuthi babe yizimakethe abazithandayo, abalungisa imisebenzi yokulungisa nokukhanya, nge-Quick Lane njengengxenye eyigugu yawo wonke umphakathi ukufaka izimiso ezifanayo zebhizinisi kanye nensizakalo yamakhasimende esiyiletha emhlabeni jikelele.
Izikhungo Zendlela Esheshayo zihlose ukuhlinzeka abathengi ngamanani aphezulu aphezulu futhi ahlukile ngokubaluleka kwamasondo nezinsizakalo zezimoto esimweni esihle, esimeme. Indlela yethu yokulungisa okusemqoka yakhelwe ukuletha Ukulungela Ukuzithemba kanye nokuvumelana kokulethwa kwezinsizakalo kunethiwekhi yayo yonke.
Siyaqaphela futhi siyaqonda ukuthi amakhasimende ethu aya ngokuya egqugquzelwa yinani kanye lula ezinqumweni zawo zokuthenga. I-Quick Lane isiphakamiso esinqunyelwe ukuletha isipiliyoni sekhasimende esivelele, umuntu ngamunye futhi osekelwa ubuchwepheshe, ochwepheshe, izinqubo kanye nezinsizakalo ezivelele. Injongo ye-Quick Lane ukuhlinzeka nge-Convenience ne-Confidence ngokulondolozela ubudlelwane obonakalayo nobonisana obugcina amakhasimende ebuya, akhe abathengi, abathembekile futhi bemelela embonini yethu eyinselele.
I-Quick Lane ihlose ukuba yisevisi eyintandokazi yokulungiswa nokulungiswa kwe-UK, ne-Quick Lane Center njengengxenye yenani lawo wonke umphakathi, enikela ngezidingo zamakhasimende ayo. Ngokunikela ngezinga eliphakeme kakhulu lesipiliyoni samakhasimende nokulungiswa kwekhwalithi ephezulu kunethiwekhi kazwelonke, i-Quick Lane neFranchisees yayo ingajabulela impumelelo.
Ngaso sonke isikhathi sizama konke okusemandleni ethu ukufeza inhloso yethu ngokusebenzisa izimiso zethu kanye namagugu asemqoka kukho konke esikwenzayo.
Delight: Sinikeza abathengi ulwazi olwedlula okulindelwe.
passion: Sibeka izinhliziyo zethu emsebenzini wethu futhi sikujabulela esikwenzayo.
Izikhungo: Sigxile ekunikezeni abathengi insizakalo efudumele, enobungane, ewusizo.
Ukuziphatha: Sihlala sicebisa abathengi bethu ukuthi yini elungele bona nemoto yabo, hhayi lokho okungazikhulisela inzuzo.
Ezempilo nokuphepha: Siqinisekisa ukubambelela ngokuqinile emikhombandlela yezempilo nokuphepha eyenzelwe ukuvikela amakhasimende ethu, abasebenzi bethu, amabhizinisi ethu kanye nomkhiqizo wethu.
Creativity: Sisondela kuyo yonke inselelo ngomqondo nangengqondo evulekile, ngoba lokhu kusisiza ukuthola isisombululo esifanele.
Ukubambisana: Sigxile ekugxiliseni, ekwakheni nasekulondolozeni umoya omuhle weqembu.
Ukuthembeka: Sicacile futhi sicacile ekuphakamisweni kwethu, inqubomgomo yamanani anconyiwe, izinkontileka nokusebenzelana, ngoba lokhu kwakha ukwethembana nokuthakazelelwa ngababili nabathengi bethu baseFrance.
Ubuqotho: Sigcina izinga eliphezulu lobuchwepheshe ebhizinisini nakuyo yonke imisebenzi yalo.
Ukuthuthuka Okuqhubekayo: Siyaqonda ukuthi ukugqama kuyiphuzu lokuhambisa elinamandla, nokuthi amakhono, ulwazi nezenzo - futhi kufanele - zithuthukiswe njalo futhi njalo.
Lapho kunenkampani khona manje, indaba yempumelelo, ukukhula nokukhula okungaba khona, isivinini sentuthuko, izibalo, namaqiniso athakazelisayo. Yilapho uthengisa khona umkhiqizo wakho nempumelelo yawo.
Iphakethe elikhulu leFranchise, kufaka phakathi:
Ukufinyelela ku-Unique Center Management & CRM System
Isipiliyoni se-Intanethi Yesikhashana - Iwebhusayithi; Uhlelo lokusebenza; Imithombo Yezokuxhumana
Ukwethulwa Kwebhizinisi Nokwesekwa Kwezimakethe
Ukufinyelela kuketheni lokuphakelwa komkhiqizo we-Quick Lane
Ukuxhaswa kwebhizinisi okuqhubekayo
Ukusetshenziswa komkhiqizo wethu wesizwe ohlonishwayo nesitayela sokuhweba
Isiqondiso ekukhetheni nasekutholeni impahla efanele ibhizinisi lakho
Ukuhlinzeka ngezinsizakalo zethu ezigxile kumakhasimende ezinsizakalweni zethu ezikhula njalo zamakhasimende, nokukhulisa isiphakamiso se-Quick Lane, sinikeza ithuba le-Quick Lane Area Developer Franchise ithuba lokuthola abaFundayo abafanelekayo. I-Frontisee yendawo ngayinye izoba nesibopho sokuvula nokukhulisa inani okuvunyelwene ngalo Lezikhungo ze-QL endaweni echaziwe ekhethekile, esikhathini esivunyelwe. Inani leZikhungo ze-QL lizohluka ngokuya ngendawo ngokuya ngezici ezahlukahlukene ezinjengobuningi babantu, inani labantu kanye nobunikazi bezimoto.